QeerrooBaalee jaallan keesaaniif birmadhaa!! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosQeerrooBaalee jaallan keesaaniif birmadhaa!!
QeerrooBaalee jaallan keesaaniif birmadhaa!
ICCITII TIKA WARRA BILXIGINNAA WALLAGGAAFI GUJIIRRATTI AGGAAMAME~Dafa Waliin Gahaa!!
1.Waraanni MNO tiin dhiyeenya kana leenjifamanii gara Wallaggaatti bobbaafamani Oromoo Lixaa fi WBO hadheessanii akka jibban haalaan sammuu isaanirratti hojjetamee jira. Qajeelfamni mootummaan isaaniif kennes:
2. WBO deeggaru ykn miseensota WBO ti namoota jedhamanii shakkamani yoo qabaman akka battalumatti ajjeefamani dha ( qabamanis odeeffannoo icciitii nugargaaru waan nuuf hin kennineef mana hidhaatti geessuu hin barbaachisu, battalumatti ajjeesaa) jedhamanii qajeelfama jabaa fudhataniiru.
3. Oromoon gara Lixaa ummata mootummaa jibbuurraa deebi’uu hin dandeenye waan ta’eef filannoon qabnu tarkaanfiin gara jabeenyaa hundumaa irratti fudhatamee akka jiiluu fi mootummaaf jilbeeffatu gochuu dha. Kanaafuu, eenyumaafuu garaa laafumama tokko akka hinargsiifneefi filannoon dura Lixi Oromiyaa akka qulqullaa’u dhaamame.
4. Internet fi Bilbilli hanga Fulbaanaatti hin gadhiifamu akkasumas Filannoon naannoo kanatti hin gaggeeffamu .Humni Waraanaa MNOtiin leenjifamaa jiru (marsaa lammaffaan)torban lamaa booda gara Gujii fi Wallaggaatti dabalataan ni bobbaafama. Leenjiin waraana oomishuu kun otoo addaan hin citiin gaggeeffamuu itti fufa. Kanaafis maallaqa doolaarri kumni hedduun gargaarsa biyya alaarraa argameera.
5. Waajjirri ABOs ta’e KFO irratti karaa mul’ataa hintaaneen akka dhiibbaan irratti geggeeffamu. Namoota ciccimoo waajjiricha keessa hojjetan gaadanii rukutuufi jiilchuu yooaan maallaqaan bituu. Karaa kamiinuu yoo ta’e filannoo dura namoota WBOfi ABO jajjabootti shakkaman qulqulleessuun filannoo bara 2020 injifannoon goolabuun mootummaa ijaarufi karoora wagga 50 baasuu kan jedhuun xumurameera.
Beekan Erena, 02/21/2020
GALATAAFI KABAJA~BOFA AFAA JALAA~ FAKKEESSAA~DALIILUMMAA~ABIY AHMED ALI A 21ST FILM MAKER HAHA 2020
#QeerrooBaalee jaallan keesaaniif birmadhaa!
Jaal keenya sabboonaa Kutataa Shaffilaa waliin dhaabbadhaa
Amma illee hin duune; jarri dibbee reebaa jirti!!
ህዝቢ ትግራይ ይሕመሎ ተጋዳላይ ጠርጣራው ሱቡሕ
BK Biruk this one is for you and your wife Muna Gebre
Himamee ture! Ammas ni himama!
Madda hundee qabsoo Oromoo
Gaafa Lammaa fi Abiybirraa QEERROON abdii kaafattee ture san jaallan kuni lamaan akkasiin dhaamsa dhaammatan!
#FreeKutataa Shaffilaa and #Kormilee!